प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली – Pahilo Page
बच्चाहरुको त्यस्तो प्रश्न, जसले फर्किए प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै बाल्यकालतिर ?
काठमाडौं, १७ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकका बालबालिकाको चेहरामा खुशी देख्दा आफू पनि खुशी हुने बताएका छन् । नेपाल स्काउटले आयोजना गरेको ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा एक विद्यार्थीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । “बालबालिकाको चेहरामा खुशी देखें भने म पनि ...
टुभालुका सरकार प्रमुख इटालेलीलाई आफ्नो देश समुद्रमा भासिने डर
काठमाडौं, १५ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र टुभालुका सरकार प्रमुख (गभर्नर अफ जेनेरल) लावोका टाइना इटालेली ( ीबपयदब त्बभष्ब क्ष्तबभिष् ि०बीच हिजो बेलुकी होटल सोल्टीमा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा जलवायु परिवर्तनले दुबै देशलाई पारेका असर र त्यसबाट जोगिनका लागि अपनाउनु पर्ने सजगताको विषयमा छलफल भएको छ । समुद्रको टा...
एचआइभी एड्स संक्रमितलाई उपचारको अभाव हुन नदिइने : प्रम ओली
काठमाण्डौ, १५ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एचआइभी एड्स संक्रमितलाई उपचारको अभाव हुन नदिने बताएका छन् । ३१ औं विश्व एड्स दिवसको अवसरमा एक सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एचआइभी संक्रमितलाई सरकारले निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन् । “नेपालमा एचआइभी संक्रमितहरुलाई सरकारले निःशुल्क औषधिको व्यवस...
कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन भने राष्ट्रवादी नेता
काठमाडौं, १४ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कीर्तिनिधि विष्ट राष्ट्रवादी नेता भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आज ‘कीर्तिनिधि विष्ट प्रखर राष्ट्रवादी नेता’ पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विष्टले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रवादी चरित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरे । “तत्कालीन समयमा नेप...
काठमाडौं, ४ मसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई सरकारको तर्फबाट कुनै दबाब वा हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको परिचयात्क बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको नीति तर्जुमा गर्न अनु...
काठमाडौं, २४ भदौ । शिक्षा दिवस समारोहको निर्धारित समय शनिबार दिउँसो १ बजे भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली ३ बजे मात्रै कार्यक्रमस्थल पुगे । प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्रीलाई दुई घण्टा कुरेर बस्नेमा अधिकांश स्कुले बालबालिका थिए । प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्थित सभा हलमा उनीहरुका लागि यो अवधि निकै छटपटीपूर्ण थियो । १ बजे समारोह उ...
ओलीले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सोधे, जनताले कहिले इन्जिनियर आउँछन् भनेर पर्खेर बस्छन् ?
काठमाडौं, २१ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १३ औं बैठकलाई आज सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै समितिका अध्यक्ष समेत प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन नियमले कुनै प्रकारका ढिलाइ भए त्यसलाई...
प्रधानमन्त्रीले भने, विमस्टेक शिखर सम्मेलन फलदायी
काठमाण्डौ, १८ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमस्टेक राष्ट्रहरुको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना र निर्णय दुबैका दृष्टिले फलदायी भएको बताएका छन् । आज सिंहदरबारमा आयोजित विमस्टेक शिखर सम्मेलन तयारी तथा व्यवस्थापन मूल समितिको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ...
काठमाडौं, १५ भदौ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले विमिस्टेकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आगन्तुक राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुलाई बुद्ध र सगरमाथाको देशमा स्वागत गरेका छन् । विश्वको कूल जनसंख्याको २२ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने बंगालको खाडी क्षेत्रका राष्ट्रहरुका तर्फबाट हामी यहाँ यस क्षेत्रमा श...